Yonke into oyifunayo ukuchonga iiRock
Sayensi Iintlobo zeeRock
Naluphi na u-rockhound olungileyo ufanele ufikelele edwaleni anengxaki yokuchonga, ingakumbi ukuba indawo apho idwala lafunyanwa khona lingaziwa. Ukufumanisa ilitye, cinga nje ngejoloji kwaye uhlolisise iimpawu zayo ezibonakalayo kwiimpawu. Ezi ngcebiso kunye neetafile zilandelayo ziqulethe iziganeko eziza kukunceda uqonde amatshe aqhelekileyo emhlabeni.
Iingcebiso zoLwazi lweDwala
Okokuqala, zigqibo ukuba ilitye lakho lingenanto, i-sedimentary okanye i-metamorphic.
Amatye angama- granite okanye i-lava ayinzima, iqhwa liyancibilika kunye nobunzima okanye ukubeka. Imiqobo efana nale iqulethe i-minerals, white and / or grey minerals.
Iinqweliso ze-sedimentary ezifana ne-limestone okanye i-shale zinyanzeliswe ngedaka kunye neziqendu ezinjenge-sandy okanye zedongwe (strata). Ngokuqhelekileyo ibomvu ibe yimpunga embala kwaye ingaba nama-fossils namanzi okanye amanqaku omoya.
Amatye e- Metamorphic afana ne-marble ayabunzima, kunye namacandelwana alungileyo okanye aphilileyo (amahlamvu) amaminerali alula kunye namnyama. Ziza ngemibala eyahlukeneyo kwaye zihlala ziqukethe i-glittery mica.
Emva koko, khangela ubungakanani belawa kunye nobunzima.
Ubungakanani bezityalo : Iibhokhwe ezinqabileyo zibonakala kwiso iso, kwaye izimbiwa ziyakuthi zichongwe ngaphandle kokusebenzisa umalimi. Iigrafi ezintle zizincinci kwaye ngokuqhelekileyo azikwazi ukuchongwa ngaphandle kokusebenzisa i- magnifier .
Ubunzima: Oku kulinganiswa ngesikali se-Mohs kwaye kubhekiswe kwiiminerali eziqulethwe kwidwala. Ngamazwi alula, i-rock engqongqo yeglasi kunye nentsimbi, ngokuqhelekileyo ibonisa i-quartz yamaminerali okanye i-feldspar, ene-hard Mohs ye-6 okanye ngaphezulu. I-rock elula ayifaki isicatshulwa kodwa iya kukhanda amanxeba (i-Mohs isilinganisi se-3 ukuya ku-5.5), ngelixa idwala elithambileyo aliyi kukhanda amanxeba (i-Mohs isilinganiselo se-1 kuya ku-2).
Isatifiketi soLwazi lweDwala
Emva kokuba uzimisele ukuba uluphi uhlobo lwerwala onalo, jonga ngokukhawuleza umbala kunye nokubunjwa kwawo. Oku kuya kukunceda uqonde oko. Qala kwikholam ekhohlo yeetafile ezifanelekileyo uze usebenze ngendlela yakho. Landela idibanisa kwimifanekiso kunye nolunye ulwazi.
Ukuchongwa kweDolophu yaseGnega
Ubukhulu bezityalo Umbala oqhelekileyo Okunye Ukwakhiwa Uhlobo lweDwala
efanelekileyo mnyama kubonakala ngombala ilava iglasi Obsidian
efanelekileyo kukhanya maninzi amaninzi i-lava iqhwitha esuka kwi-lava ene-sticky Ipumice
efanelekileyo mnyama ezininzi iimbumba i-lava iqhoqhekeza kwi-lava emanzi Scoria
idibene okanye ixutywe kukhanya i quartz i-silica ephezulu Felsite
idibene okanye ixutywe phakathi phakathi kwefelsite kunye ne-basalt lava-silica Andesite
idibene okanye ixutywe mnyama ayinayo i-quartz lava e silica ephantsi Basalt
zixutywe nawuphi umbala iinhlamvu ezinkulu kwi-matrix iinhlamvu ezinkulu ze-feldspar, i-quartz, i-pyroxene okanye i-olivine Porphyry
qhekeza kukhanya uluhlu olubanzi lwembala kunye nobukhulu bezityalo feldspar kunye ne-quartz nge mica encane, i-amphibole okanye i-pyroxene Granite
qhekeza kukhanya njengegranite kodwa ngaphandle kwekota feldspar nge mica encane, i-amphibole okanye i-pyroxene Syenite
qhekeza ukukhanya phakathi ncinane okanye akukho alkali feldspar plagioclase kunye ne-quartz ngamaminerali amnyama Tonalite
qhekeza phakathi ukuya kumnyama i-quartz encinci okanye ayikho i-calcium plagioclase kunye namaminerali amnyama Diorite
qhekeza phakathi ukuya kumnyama akukho quartz; unakho u-olivine i-calcium plagioclase kunye namaminerali amnyama Gabbro
qhekeza mnyama dense; soloko i-olivine olivine kunye ne-amphibole kunye / okanye pyroxene Peridotite
qhekeza mnyama dense kakhulu pyroxene kunye ne-olivine kunye ne-amphibole IProroxenite
qhekeza luhlaza dense ubuncinane i-90% yeolivine Dunite
kakhulu kakhulu nawuphi umbala ngokuqhelekileyo kwiimimandla ezincinci ngokuqhelekileyo i-granitic Pegmatite
I-ID yeShedimentary Rock
U bunzima Ubukhulu bezityalo Ukwakhiwa Okunye Uhlobo lweDwala
nzima qhekeza quartz ecocekileyo ezimhlophe zibe mnyama Sandstone
nzima qhekeza quartz kunye ne feldspar zidla kakhulu Arkose
nzima okanye elula zixutywe isixube esixubekileyo kunye neeritye kunye nodongwe grey okanye mnyama kwaye "ungcolile" Wacke /
nzima okanye elula zixutywe mixube kunye neendwangu iindonga ezijikelezileyo kwiimatrice ezidlulileyo Ukudibanisa
ithambile zixutywe mixube kunye neendwangu izixhobo ezibukhali kwi-matrix Breccia
nzima efanelekileyo isanti esihle kakhulu; akukho dongwe Uziva ugugu kumazinyo Siltstone
nzima efanelekileyo chalcedony kungabikho i-asidi Chert
ithambile efanelekileyo zobumba zobumba ukwahlula kwiindawo Shale
ithambile efanelekileyo nekhabhoni mnyama; kutshisa ngomsi wokula Amalahle
ithambile efanelekileyo calcite iifizz nge-asidi Limestone
ithambile liqhekeza okanye lihle dolomite akukho futha nge-asidi ngaphandle koyilo IDolomite idwala
ithambile qhekeza iigobolis ziqhekeza Coquina
kakhulu qhekeza halite ityuwa Ilawa ityuwa
kakhulu qhekeza gypsum ezimhlophe, i-tan okanye i-pinki I-Rock Gypsum
Ukuchongwa kweRa yeMamororphic
F oliation Ubukhulu bezityalo Umbala oqhelekileyo Okunye Uhlobo lweDwala
zihlutha efanelekileyo kukhanya kakhulu; ukuva I-Soapstone
zihlutha efanelekileyo mnyama ithambileyo; ukucoca okunzulu Slate
engenziwanga efanelekileyo mnyama ithambileyo; isakhiwo esikhulu Argillite
zihlutha efanelekileyo mnyama kukhanya; ukunyuka kwamabala Phyllite
zihlutha qhekeza kuxutywe mnyama kwaye kukhanya yicwecwe kwaye ityhidiwe; zikhuphe iikristali ezinkulu Mylonite
zihlutha qhekeza kuxutywe mnyama kwaye kukhanya mabala obomvu; kaninzi kunamakhredithi amakhulu Schist
zihlutha qhekeza zixutywe ziboshwe Gneiss
zihlutha qhekeza zixutywe ukuphazamisa "izityholo" Migmatite
zihlutha qhekeza mnyama i-hornblende Amphibolite
engenziwanga efanelekileyo oluhlaza ithambileyo; indawo ekhanyayo, emanzini Inyoka
engenziwanga zihle okanye ziqine mnyama imibala engacacanga kunye ne-opaque, ifumaneka kufuphi ne-intrusions Hornfels
engenziwanga qhekeza obomvu nokuluhlaza dense; garnet kunye ne pyroxene Eclogite
engenziwanga qhekeza kukhanya ithambileyo; i-calcite okanye i-dolomite ngovavanyo lwe-asidi IMarble
engenziwanga qhekeza kukhanya i-quartz (akukho fayili kunye ne-asidi) Quartzite
Ufuna Uncedo olungakumbi?
Ngaba unenkathazo ekuchazeni ilitye lakho? Zama ukudibanisa ne-geologist kwi-museum yendalo yemyuzi okanye yunivesithi. Kusebenza ngakumbi ukufumana umbuzo wakho uphendulwe ngcali!
Iimpawu eziPhambili zeGemstone
Ubungqina okanye Ubuthakathaka: Uphi umehluko?
Konke Okufuneka Ukwazi Ngamalahle
Iintlobo zeMetamorphic Rocks
AmaGementi kaRhulumente aseUnited States
Oko Okufuneka Ukwazi Ngaphambi kokuba Uthenge Iqoqo leDwala
Indlela yokuchonga iiMpawu ezi-3 eziMkhulu
Lapho izinto zivela khona: Izinto zoLwazi
Ukujonga iLwala njengeGiologist
Iindawo ezingcwele zokutyelela eUnited States
Izihloko eziSiseko zoMoya
UDavid noGoliyati Umxholo weSiFundo seBhayibhile
Ukufunda iZibhalo kwiVeki yesiBili yeLente
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Ukuncedisa' ('Ukusilela, ukuhluleka')
Umkhusane weVeronica: IRelicic Miracle Reiscovered?
Ziziphi iiNcwadi eziPhezulu?
Uhlobo lweMacbeth Uhlalutyo
Yintoni Ibhokisi leLiksi?
Ukuwela uLwandle Olubomvu - Ingxelo yeBhayibhile yeBhayibhile
Iingcaphuno ezikhuthazayo zamaGymnasts - ezivela kwi-Famous Gymnasts
Samurai Warriors yaseJapan
'Ukutshata Nabantwana Ngeenkwenkwezi: Bakho Bakho Ngoku?
Iimpawu eziziwayo ngokuphila ngokulungileyo, ubomi obunenjongo
Imincintiswano yamaNgoma yomculo
Ama-Masters ka-2009: Uloyiso oluthambileyo lweChabrera
Ulwahlulo lweZahluko ngeeMibhalo eziHlangeneyo zeeNombolo
Simmons College Admissions
Konke malunga nekholomu eyakhiweyo
Izizathu zeCarbon Dioxide Poisoning
Iingoma ezili-10 ezidumileyo zePapaphon
I-Plymouth State University Admissions
I-Notre Dame yase-Maryland University Admissions